စိတ်ဖိစီးမှုက အနာဂတ်ကလေးရဲ့ gender အပေါ်ဘယ်လို သက်ရောက်နိုင်သလဲ? - Chit MayMay
Home Pregnancy Health စိတ်ဖိစီးမှုက အနာဂတ်ကလေးရဲ့ gender အပေါ်ဘယ်လို သက်ရောက်နိုင်သလဲ?
ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အခွင့်အလမ်းက မျိုးဥမကြွေခင် ၁ရက်မှာ ကြိုးစားလျှင် ၃၁%ဖြစ်ပြီး မျိုးဥကြွေချိန်အတွင်း ကြိုးစားလျှင် ၃၃% ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သုတေသီတွေက ကိုယ်ဝန်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အချက်တွေကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သုတေသီတွေဟာ ဘယ်လိုလူက ယောကျ်ားလေး (ဒါမှမဟုတ်) မိန်းကလေးတစ်ယောက် မွေးနိုင်ခြေများတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် သုတေသနအချို့မှာ ရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုက နောက်မွေးလာမယ့် သင့်ကလေးရဲ့ ကျား/မရေးရာအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်
မွေးဖွားမှုမှာ သဘာဝ အချိုးက မိန်းကလေး အယောက် ၁၀၀ လျှင် ယောကျ်ားလေးက ၁၀၅ ဝန်းကျင်ခန့် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သွေးသကြားဓါတ် ၊ဟော်မုန်းပမာဏ မြင့်မားမှု၊ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်အပြောင်းအလဲ ကဲ့သို့သော စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး သုံးပုံတစ်ပုံသာလျှင် သားယောကျာ်းလေးမွေးခဲ့ကြောင်း သုတေသီတွေ သတိပြုမိခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ဖိအားတွေက ဗိုက်ထဲက ကလေးရဲ့ လိင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အချို့သော လေ့လာမှုတွေအရ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ သားယောကျ်ားလေးမွေးနိုင်ခြေနည်းကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ဒါဟာ gender ပေါ်မှာ ၁၀၀% လွှမ်းမိုးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုလို့ ထည့်သွင်း မစဉ်းစားပေမယ့် ဒီအချက်က သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ စီစဉ်နေစဉ်မှာ ထည့်တွက်ရမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုက ပိုပြီးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုတွေက သားယောကျ်ားလေး မွေးဖို့ အခွင့်အရေးကို လျှော့ချနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ သားယောကျ်ားလေးတွေကို မွေးဖွားခြင်းသည် ကျန်းမာသော အမျိုးသမီးတွေမှာ ၅၆%၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှု ခံစားနေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ၄၀% နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ မိခင်တွေမှာ ၃၁% မျှရှိတယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ စီစဉ်နေစဉ် လူမှုရေးပံ့ပိုးမှုက အရေးကြီးပါတယ်
မိခင်တစ်ယောက်ဟာ လူမှုရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ များများရလေ၊ သားယောကျ်ားလေးမွေးနိုင်လေလေလို့ သုတေသနတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းစေဖို့ လူမှုရေးအထောက်အကူပြု ကဏ္ဍသုံးခုကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုများခြင်းက အနာဂတ်ကလေးရဲ့ ကျားမရေးရာအပေါ် သက်ရောက်နိုင်တဲ့အရာအဖြစ်လည်း အစီရင်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော် (social support)လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုတွေက မိခင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်တဲ့ ကြီးမားသော ဇီဝဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးမှု ရှိပါတယ်။ လုံခြုံ စိတ်ချရတဲ့ ခံစားမှုရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ အနားယူအပန်းဖြေတာမျိုး ကျင့်သုံးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
Previous articleသားယောကျ်ားလေးတွေကို ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပျိုးထောင်မလဲ?
Next articleသာမန်မိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံ (၄)မျိုးနှင့် အနာဂတ်မှာ ကလေးကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပုံ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကာလ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်တာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ